htc 10 vs samsung galaxy s7 umda
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-HTC 10 vs Samsung Galaxy S7
I-HTC 10 vs Samsung Galaxy S7
Siye sayazi i-HTC 10 kunye ne-Samsung Galaxy S7 edge kakuhle, kwaye yiyo eyonwabisayo kakhulu kuwo onke amanyathelo endlela. Ezi zimbini zeefowuni zethu esizithandayo ze-Android ngoku.
Zahluke kwaphela, nangona kunjalo. Yahluke ngokwenene, enyanisweni. Ephakamileyo kwaye inamandla, i-Galaxy S7 edge iyaqhubeka kunye ne-Samsung yefilosofi ngokubhekiselele kwi-hardware kunye ne-software yoyilo, kwaye kuyafana nokulwa ne-HTC kunye ne-flagship yayo ye-10.
Zahluke njani, kwaye ngaba sinokugqiba kwelokuba enye iyona nto ibhetele kwenye? Yimba ukuze ufumane.
Inomzimba wealuminium, i-HTC 10 ngumbono wokujonga ngohlobo lwendlela yomntu. Ivakala ngokunyanisekileyo njengesixhobo sendoda, hayi into yokudlala. I-apos nayo yahlukile kubanduleli bayo, ngezitshixo zokuhambahamba ezinamandla, kwaye akukho namnye kubo othetha ngaphambili nge-BoomSound izithethi.
Ukuba besinokwandisa isikweko sokujonga kancinci kancinci, singatsho ukuba ngelixa i-HTC 10 ivakalelwa njengesiqhelo imoto yakho yohlobo lwemisipha yaseMelika, ngelixa i-Samsung Galaxy S7 umphetho uyi-BMW i8 yombane ene-future , kodwa nesibheno se-unisex. Umxube phakathi kweglasi kunye nesinyithi, i-S7 edge iyancipha kwaye ilula, kodwa ikhulu kwaye inikezela izinto ezifana ne-IP68-certification, oku kuthetha ukuba i-apos-tight-tight and water-resistant. Ngelixa ingakhuselwanga, i-HTC 10 ubuncinci iyaphika.
Xa kuziwa kwimiba yeenjongo, ezinje nge-ergonomics, thina & apos siyaphikisana. Umda we-S7 unikezela ukubambelela okungcono ngenxa yeglasi engasemva, kodwa ikwaye inkulu kwaye izikrini ezisecaleni azizincedi i-ergonomics kwaphela. I-HTC 10 ikwanayo neqhosha lamandla elilungiswe kakuhle ngasekunene, kwaye irocket rocker yayo ifikeleleka ngokulula. Xa kuthelekiswa, ukufikelela kumaqhosha evolumu kumda we-S7 kunokuba yinto elula.
5.74 x 2.83 x 0.35 intshi
I-145.9 x 71.9. x 9 mm
Jonga ngokupheleleyo i-HTC 10 vs Samsung Galaxy S7 yesayizi yokuthelekisa ubungakanani okanye uthelekise nezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
Emva kweminyaka yokuncamathela kwimiboniso emincinci enezisombululo ezisezantsi kunezimbangi zayo — ezazingeyonto imbi — i-HTC ekugqibeleni iyazibophelela kwi-specs nge-10. Ukupakisha isibonisi se-LCD esingu-5.2-intshi nge-Quad HD (1440 x 2560 Isisombululo, i-HTC 10 nangona kunjalo ayinikezeli ngescreen sokuthengisa izindlu nomhlaba njengombala weGalaxy S7 kunye nendawo yayo ebanzi, 5.5-intshi ye-AMOLED iphaneli enenani elifanayo leepikseli. Qiniseka ukuba bobabini banika inqanaba elincomekayo leenkcukacha-ngakumbi, enyanisweni, kunokuba kufuneka.
Umda weGPS S7 uphumelela ngokuqaqamba -ezimbini phezulu nasezantsi. Ukujonga ngaphezulu kwe-nits ezingama-490 kunye nokulawula ubuncinci njenge-2 nits, i-Samsung kunye ne-apos; s i-flagship igubungela i-HTC 10, encipha kancinci xa kufuneka ikhanye, kwaye ikhanye xa kufuneka imnyama.
Okokugqibela, kufanele ukuba kukhankanywe ukuba umda weGPS S7 unenqaku lokubonisa elihlala lihleli, okuthetha ukuba liyakubonisa ulwazi nokuba ifowuni ilele-ulwazi olunjengexesha kunye nomhla, okanye ikhalenda yakho. Nangona kunjalo, kuba oku kukhupha ibhetri kwaye kuyasetyenziswa ngokungathandabuzekiyo, thina & apos asifuni ukudubula amanye amanqaku ngaphezulu kwi-Samsung & apos; camp kule.
(Kulungile) 1: 1594
Ukuchaneka kokumnyama ngwevu
Eyona ilungileyo yefowuni encinci ye-android
lg stylo 4 metropcs umhla wokukhutshwa
I-Apple AirPods enoPhononongo lweMeko yokuTsala ngaphandle kwamacingo
I-AT & T & apos; s AppMap Family App ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App - igcina iithebhu kubantu obathandayo
I-T-Mobile ishenxisa irhafu kunye nemirhumo kwi-T-Mobile One yababhalisi abavumayo kwi-AutoPay
Ungawusebenzisa njani uMfanekiso kuMfanekiso kwi-iPhone yakho nge-iOS 14
Umhla wokukhutshwa kweApple AirPods Pro 2, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Yeyiphi inguqulelo ye-OnePlus 6 ekufuneka ndiyithengile? Isibuko esimnyama vs Midnight Black Black vs Silk White ukuthelekisa